Booshaka: Fantaro, ampidiro ary hamafiso ao amin'ny Facebook
Talata, Jolay 24, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Na dia manaiky aza ny mpivarotra rehetra fa ny varotra am-bava dia fomba azo antoka hampitomboana ny fahitana sy ny varotra, maro kosa no mbola very maina amin'ny fomba fananganana fampielezan-kevitra am-bava mahomby amin'ny Facebook. Izany no toerana Booshaka afaka manampy. Booshaka dia nanatsotra ny marketing amin'ny vava amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny alàlan'ny fanampiana ny marika hahatakatra tsara kokoa ny fototr'izy ireo ary hanangana fifandraisana amin'ireo mpankafy sy mpanaraka azy.
Booshaka dia mahatsapa ny angon-drakitra Facebook ary manome fomba fijery sarobidy izay azonao ampiasaina amin'ny fahitana atiny sy ny famokarana atiny, ny fahazoan'ny mpanjifa, ny fikarohana eny an-tsena, ny kendrena ary ny fanatsarana ny fanentanana, ny fanondroana ny tombantombana sy ny tombam-bidin'ny mpiara-miasa, ny famakafakana mpifaninana, ny refy, ny refy ary maro hafa.
Booshaka dia manome ny hevitr'ireo mpankafy ambony indrindra amin'ny mason'ny fanehoan-kevitra, ny tiana ary ny hetsika hafa. Booshaka dia mihoatra ny fahitana na fisianana ambonin'ny tany mba hanomezana lanja ny fandraisan'anjaran'ny mpankafy mifototra amin'ny kalitao sy ny fiantraikany. Ny tsena dia mahazo fahitana momba ny statin'ny mpankafy sy ny hetsika vao haingana. Ny fahitana toy izany dia mamela ny mpivarotra hifantoka amin'ny karazana olona marina ary hamantatra izay mahasarika ny tsindry sy ny hetsika rehefa mampivelatra ny drafitra haino aman-jery sy ny paikadim-pirahalahiana
Santionany Top Fans Leaderboard:
Booshaka dia mihoatra ny presser ambony. Raha ny fototra Top Fan Leaderboard manome marika miaraka amin'ny fomba fijery ny tena zava-misy, ny fanamafisana ny fahana feed vaovao dia manampy ny marika hanatsara ny fifanakalozana ary hanamafisana ny fandraisan'anjaran'ny mpankafy. Ny fiasa valisoa ara-tsosialy dia mamela ny fametrahana programa hanomezana valisoa ireo mpankafy ambony indrindra, manitatra ny fivarotana tsy fivadihana amin'ny sehatry ny media sosialy. Endri-javatra mandroso hafa, Top Fans Pro manamora ny fampitomboana ny fanaingoana ary manome endrika hafa azo ampiasaina - ao anatin'izany ny iray izay manampy amin'ny famongorana ny spam.
Santionany Top Fans Pro Leaderboard:
Booshaka dia manome fifandraisana misy eo amin'ny sehatra rehefa manome isa sy manasokajy ny fampidirana mpankafy - izay manome fomba fijery lalindalina kokoa amin'ny data. Haingam-pandeha ny fametrahana azy, miditra Mpankafy Top Booshaka, ny tolotra ifotony, maimaim-poana. Na ny kinova Top Fans Pro aza dia maimaim-poana mandritra ny fito andro voalohany. Ny vidiny fanampiny dia miankina amin'ny isan'ny mpankafy anananao!
Tags: booshakaFacebookmpankafy facebooktiany facebookFacebook Marketingfanehoan-kevitra ambonympankafy ambonytiana ambony
Fikarohana voajanahary ve ny karama?